Guqula: I-CRM eDityanisiweyo ye-SMB | Martech Zone
Guqula: I-CRM eDityanisiweyo yelifu ye-SMB
NgoLwesihlanu, Septemba 6, 2013 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, 2015 Douglas Karr
Ulawulo oludibene nabathengi Iinkqubo yenye yezinto ezimbi eziyimfuneko… ngaphandle kokuba ziphuculwe kakuhle. Ukuba yinkqubo enzima, ifuna ukuba inkampani iphazamise abasebenzi bayo, ifuna ixesha elininzi kunye namandla, kwaye ayikuniki ngcebiso inokusebenziseka. Iinkqubo ezintsha zeCRM ngoku ziyavela ezizilungelelanisa ngokusondeleyo neenkqubo zangaphakathi ezithathwa ngamaqela okuthengisa kunye nentengiso.
Guqula ichaza njenge-CRM enamandla, kodwa ilula kumashishini amancinci naphakathi. Banikezela ngesilingo sasimahla kunye nokuhlawulwa kwenyanga okusekwe ngumsebenzisi. Iimpawu eziphambili zenkqubo zezi:
into yokuZenzekelayo -Fumana, uhlaziye kwaye uvale ngokukhawuleza. Yakha amaqela okuphumelela kunye nokuhlengahlengisa ishishini lakho usebenzisa ukuhamba komsebenzi okusekwe kwinkqubo, iitemplate ezime nkqo zeshishini, kunye nolawulo olusekwe kumgaqo.
Izixhobo zokuthengisa -Kukhulisa ukukhokela kunye nokugcwalisa kakhulu ishishini lakho ngezixhobo ezinamandla zokuthengisa. Bandakanya amathemba akho kwaye uwagcine ebambekile kwizibhengezo ezitsha kunye nakwizivumelwano ezinomdla. Thengisa ngcono ngentengiso ye-drip, ii-autoresponders, ukuthengisa nge-imeyile kunye nenkqubo esekwe kwizaziso.
Izixhobo zeshishini - ulawulo loshishino kunye nezixhobo zolawulo lwebranti. Beka phambili iifowuni zabathengi, imiyalezo kunye ne-imeyile kwaye uzigcine wonwabile. Yenze ibe lula ngokulawulwa koxwebhu, ilizwi, ifeksi kunye nokudityaniswa kweSMS, kunye nokudityaniswa kwePoint of Sales (POS).
Umdibaniso wentlalo -Ngenisa izikhokelo ezitsha kwaye uvale ngakumbi ukuthengisa ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo usebenzisa izixhobo zentengiso yoLuntu. Yandisa imisebenzi yakho yentengiso kwaye ukhulise ishishini lakho ngokucacileyo usebenzisa i-CRM yoLuntu. Faka iimarike ezintsha ngeFacebook nakuTwitter. I-LinkedIn kunye neDatha.com (iJigsaw), iiHovers kunye ne-Insight.
Ukuhlangana kuye kwavelisa ukuhlanganiswa kosetyenziso kunye Ukudibana kweGoto, Izinhlelo zeGoogle, Iwebhu, Twilio, Ibhokisi, Wufoo, Iincwadi ezikhawulezayo, Iincwadi ezintsha, Bhala ingxelo, Xero, IMailchimp kunye neZapier.
tags: IbhokisidibanaCRMulawulo oludibene nabathengiBhala ingxeloIincwadi ezintshaiGoogle appsintombazanamailchimpIincwadi ezikhawulezayoTwilioIwebhuwuuuXerozapier
Cwangcisa ubuNini be-WordPress ye-Yoast yeWordPress
Ivenkile yokuThengisa kwiNtengiso yeVenkile